မျက်နှာပြင်ကျယ်အတွက်အကြောင်းအရာကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချသင့်သလား။ | Martech Zone
ငါဒီ post ကိုအပေါ် chime မှအသုံးပြုသူတစ် ဦး အတွေ့အကြုံကျွမ်းကျင်သူကိုချစ်ချင်ပါတယ်။ ငါကြည့်ရှုနေပါတယ်နည်းပညာပို။ ပို။ ပို။ ပို။ ပို။ ပို။ ပို။ viewport (သင်၏စက်၏မြင်နိုင်ဒေသ) ကိုတိုးမြှင့်နေကြသည်ကိုငါတကယ်စိတ်လှုပ်ရှားမဟုတ်ပါဘူး။ ငါမယုံဘူး၊ မင်းမှာပိုပြီး resolution ရှိရင်ဒီ resolution ကိုအသုံးပြုဖို့လိုတယ်။
ဤတွင်အပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်တစ် ဦး ပြိုကွဲဖြစ်ပါတယ် Martech Zone:
လူကြိုက်အများဆုံး resolution ကတော့ 1366 × 768 ဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည်ယခုလက်ရှိဈေးကွက်တွင်ပုံမှန် laptop resolution ဖြစ်သည်။ အချိုးအစားအရ၊ ဒီဟာကဒီဖန်သားပြင်ကိုကြည့်ပုံ။
သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့, မျက်နှာပြင်အလွန်ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်အနည်းငယ်တိုတောင်းသည်။ HD ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည့်မျက်နှာပြင်ကြီးကိုဖန်တီးနိုင်သော်လည်းဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်စာဖတ်ခြင်းအတွက်အဆင်ပြေသည့်မျက်နှာပြင်မဟုတ်ပါ။ ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေကိုအဝေးကနေကြည့်တယ်။ စာဖတ်တာ၊ ကီးဘုတ်ပေါ်တက်တာနဲ့မနီးဘူး။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များသည်အကျယ်ထက်ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်ဒေါင်လိုက်မျက်နှာပြင်သည်၎င်းအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒီတော့ငါကြည့်ရှုနိုင်မှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားတဲ့ငါမရောင်းဘူးသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုဤသို့မြင်တွေ့ရသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကသတင်းစာများကလူများသည်အလျားလိုက်မဟုတ်ဘဲဒေါင်လိုက်အပိုင်းအစများဖြင့်ဖတ်တတ်ကြသည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မျက်နှာပြင်ကို ဖြတ်၍ သွားသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံသည်ပျောက်သွားလေ့ရှိသည်။ Element တွေကိုဘယ်ဘက်ကိုရွေ့မယ်ဒါမှမဟုတ်ညာဘက်ကိုရွေ့မယ်ဆိုရင်ငါ content တွေကိုဖတ်နေချိန်မှာသူတို့ကို focus မလုပ်ဘဲထားလိုက်တယ်။
ဒါနဲ့အတူငါဒီဇိုင်းပြန်ရှာမနေပါ Martech Zone မကြာမီအချိန်မရွေးအလျားလိုက်အိမ်ခြံမြေတက်ယူမျက်နှာပြင်။ မော်နီတာပေါ်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်းသည်မိုဘိုင်းဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်တို့တွင်တွေ့ရသောကွဲပြားမှုများနှင့်ထိုအတွေ့အကြုံများကိုထူးခြားစွာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဘလော့ဂ်ပေါ်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကျယ်သည်အပေါ်မှအောက်သို့ဖတ်ရန်နှင့်သော့ချက်အကြောင်းအရာကိုကြည့်ရှုစဉ်ဘေးဘားကိုတွေ့ရန်အလွန်ကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာမှာစံဗီဒီယိုအရွယ်အစားနှင့်အကျယ်အ ၀ န်း ၆၄၀px ကျယ်ပြန့်သည်။
သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ? အခြားဆိုဒ်များကိုသွားသင့်လား။ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိပုံစံနှင့်မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေသလား။
Tags: 1024x7681366x768ပုံစံhd မော်နီတာမော်နီတာကြီးစောငျ့ရှောကျMonitor resolution ကိုမော်နီတာအရွယ်အစားဆုံးဖြတ်ချက်တွေTech မှပန်းချီဆရာကျယ်ပြန့်မော်နီတာ
31:2013 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 7, 39
ငါဟာသုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံရှိကျွမ်းကျင်သူလို့မပြောနိုင်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာကွန်ရက်စာမျက်နှာများကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်၊ သင်ပြtheနာတွေကိုဂရုစိုက်ဖို့ဆိုရင်၊ လူတိုင်းကအနည်းဆုံးတုန့်ပြန်တဲ့ဒီဇိုင်းအတွက်လူတိုင်းကိုအပြင်းအထန်တွန်းအားပေးနေတယ်။ မျက်နှာ။
သင် Mashable, The Verge နှင့် NPR တို့ကဲ့သို့သောဆိုဒ်များကိုကြည့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများစွာကိုဖတ်ရှုစဉ်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ LOVE ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းသူတို့ ပို၍ ကျယ်ပြန့်သောဒီဇိုင်းသို့ပြောင်းလဲသွားပြီဟုသင်ပြောနိုင်သည်။ ၃၂ လက်မမျက်နှာပြင်။
ကျွန်တော့်ရှိ developer သည်တိကျသောအကြောင်းအရာများကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သောဒီဇိုင်းများဖြင့်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ် viewports များအတွက် redirect သုံးခြင်းတို့ကိုအကြံပြုလိမ့်မည်။ ထို့နောက်ထိုနေရာမှသွားပါ။
The Verge နှင့် Mashable ကဲ့သို့သောဆိုဒ်များနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောအပိုင်းတစ်ခုသည်အခန်းကောင်းကောင်းလိုအပ်ပြီးကျယ်ပြန့်သောဒီဇိုင်းက၎င်းကိုတကယ့်ကိုအထောက်အကူပြုသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိသည်။
31:2013 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 9, 46
ဤကြီးစွာသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်, Doug! ကျယ်ပြန့်။ တုန့်ပြန်မှုပုံစံများသည်ဆိုဒ်များပေါ်တွင်ဖတ်ရှုနိုင်မှုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုတိုးတက်စေသည်ဟုသက်သေအထောက်အထားများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သေချာပေါက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်။ ပြတ်သားတဲ့အထောက်အထားရှိသလား။